Ahịa gị dị inyere gị aka | Martech Zone
Enwere m ọtụtụ ndị enyi na-elekọta ụlọ ọrụ azụmaahịa na ọtụtụ ndị ahịa azụmaahịa na thentanetị niile mụ na ha bụ enyi. Anaghị m ekwubiga okwu ókè mgbe m kwuru na ihe kasị ewute mụ na ndị ọzọ gbasara ọrụ anyị bụ eguzogide nke azụmahịa anyị na-arụ ọrụ na.
Anyị na-akwụ ụgwọ ka anyị bịa kpọtụrụ ndị ahịa ma nyere aka na usoro ịzụ ahịa ha n'ihi na ha maara na ndị na-asọmpi ha na-enyefe ha. Ha ghọtara nke ọma na ihe ha na-arụ anaghị arụ ọrụ. Ma, mgbe anyị nyochachara atụmatụ ha, nyocha ndị na-asọ mpi ha, ma jiri atụmatụ wee laghachi… ha na-ajụ:
Anyị enweghị oge. - N'ezie? Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji na-azụ ma na-eto eto azụmaahịa gị, yabụ nwee anụrị na mbenata ego ị nwere. Kasị mma!
Anyị mere nke ahụ otu oge ma ọ naghị arụ ọrụ. - Ozugbo. Enweghị usoro ogologo oge, enweghị usoro kachasị mma, enweghị ọrụ… ọ naghị arụ ọrụ n'ihi na ị maghị ihe ị na-eme.
Agụrụ m otu ederede na ntanetị nke kwuru na ọ naghị arụ ọrụ. - Maka edemede ọ bụla n'ịntanetị enwere ederede nhata na ntanetị. Echere m na nke ahụ bụ Newton's Third Law of the Internet. Kwụsị ịchọ isiokwu ndị kwenyere na ọnọdụ gị.
Anyị enweghị ike imeli nke ahụ. - N'ezie # 2? Gaghị enwe ike ijide ma bulie azụmaahịa gị? Gịnị mere i ji kpọọ m?
Nwa nwanne nna m, onye mere ebe nrụọrụ weebụ maka Chọọchị m, kwuru… - Ee, ọ mere. Enweghi uche… Anụbeghị m banyere Churchka na mbụ.
Ahịa anyị pụrụ iche, ndị ahịa anyị dị iche. - your ahịa nwere ike ịbụ… ma ọ bụ n'ihi na gị ahịa stinks na ị na-agaghị na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ahịa na gị asọmpi na-.
Ihe azịza ndị a niile sụgharịrị bụ:
Anyị atụkwasịghị gị obi.
N'agbanyeghị nke ahụ, ị ​​kpọrọ anyị ma rịọ maka enyemaka anyị. You nyochara amaokwu anyị. You hụrụ ụlọ ọrụ toro anyị nyere anyị. Ma - ọ bụrụ na anyị ada, ị ga-achụpụ anyị ma gwa onye ọ bụla ị maara ọrụ dara ogbenye anyị mere. Ì chere n’ezie na anyị chọrọ ka nke ahụ mee?
Ebumnuche anyị dịka ndị na-ahụ maka ịre ahịa bụ ịnye ahụmịhe anyị, nka anyị, yana agụụ anyị, iji nyere azụmahịa gị aka ịme nke ọma. Anyị enwere ike ịkwụsị azụ na azụ wee banye ọrụ? Ọ na-agwụ ike.
A na m achọkarị ịmara ma ọ bụrụ na otu n'ime ndị a abanye na mberede ụgbọ ala, ma ha ga-agwa onye na-agbanyụ ọkụ otu esi eme ka ha pụọ ​​n'ụgbọ ala ahụ, otu EMT kwesịrị isi na-agwọ ha, yana otu Dọkịta kwesịrị ịgwọ. ha.
Ogologo oge, ole ole, olee otu, olee otu how uzo ozo nke ajuju a ga-esi kọwaa, na nkenke, ihe usoro na nsonaazụ ga-abụ. Ọ dị ka ịjụ onye na-anya ụgbọ ala agbụrụ ya na ndị otu ya ihe mgbanwe na usoro ọ ga-etinye tupu agbụrụ ahụ. Lelee ọnọdụ ihu igwe, ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị ọzọ, ikike ụgbọ ala tell naanị ịgwa anyị gbasara awa 4 na-esote yana ihe niile ga-eme n'apata ọ bụla.
Ọ bụrụ n’inwere onye na - ahụ maka ịzụ ahịa n’ahịa nke na - agwa gị, ikekwe ị ga - achụpụ ha maka atụmanya na - atụghị anya ya ma ghaara gị ụgha. Ọ bụrụ n’inwere onye na - ahụ maka ịre ahịa n’eziokwu, ha ga - agwa gị na ọ ga - ewe oge iji nyochaa, nwalee, ma mezie mmemme gị ka ọ nwee ike kachasị.
Ma ọ bụ egela…
Anyị nwere onye ahịa anyị nyere ọrụ ma rụọ ọrụ ruo ọtụtụ afọ. Oge ọ bụla, anyị ga-ejupụta usoro ha ma ha eche na ha emechaa ... saịtị dị elu, ndu na-adị elu, edere ọdịnaya, ọganihu. Ha ga-akwụsịtụ nkwa anyị. Anyị ga-adọ ha aka na ntị na ha kwesịrị ka atụmatụ ahụ gaa, mana ha ga-akwụsị ma atụmatụ a ga-adaba. Mgbe ahụ ha ga-alọghachikwute anyị, bido ọzọ, guzogide ihe niile anyị na-eme, ma mee mkpesa banyere nsonaazụ ya. Nsonaazụ ga-ebido mgbe niile n'ihi na anyị kwesịrị ịmaliteghachi ọkụ na mmasị na akara ha niile.
Otu ọnwa gara aga, anyị kpebiri ịhapụ ụzọ. Anyị ka nwere ike ịnweta nke ha nchịkọta na ha organic nleta bụ ala -29.26%.
Nduzi Gị Na-amị
Ihe kachasị amasị m. Izu ole na ole na nke a bụ ozi anyị na-anụ mgbe niile na ndị ahịa na-eguzogide. Ha na-eguzogide usoro ọ bụla n'oge niile, yabụ na ndị ndu na-a suụ. Nke a gosipụtara ihe niile ha na-ekwu n'oge niile… ihe anyị tụrụ aro anaghị arụ ọrụ, ndị ọzọ kwuru ya, ndị ahịa ha dịkwa iche.
Ma ọ bụ ha?
M ga-arụ ụka na mkpali na mkpochapụ nke ahịa na ire ere dị iche. A kpaliri ire ire iji mechie, a na-akpali ahịa ịchụpụ nnukwu olu nke ka mma na-eduga ahịa gị. Anyị dere n'oge na-adịbeghị anya banyere obi nkoropụ nke azụmaahịa ndị ahịa na-ere ahịa ikwu okwu na nke ahụ.
Nke a bụ ihe atụ nyere m azụmaahịa m. Anyị tinyere nnukwu mmefu ego iji gaa ma kwado ihe omume kwa afọ afọ ole na ole gara aga. O karịrị ọkara nke ego anyị na-emefu kwa afọ. Companylọ ọrụ anyị na-emechi obere akaụntụ na-enweghị nsogbu, mana anyị anaghị abanye na akaụntụ ndị bụ isi bụ arịlịka nke ndị ahịa anyị. M gaara anọgide na-emechi obere azụmahịa na-eme dịkwa mma… ma ọ bụ na m nwere ike na-arụ ọrụ ịzụlite a ole na ole oké na-eduga ga-abụ na-abịa na ihe omume.
Anyị gara ihe omume ahụ ma nọrọ ihe karịrị otu afọ na-azụlite ụzọ abụọ anyị zutere ebe ahụ. O were ihe karịrị otu afọ, mana anyị mechiri ụlọ ọrụ abụọ ahụ maka nnukwu ọrụ abụọ nke akụkọ ụlọ ọrụ anyị. A sị na anyị na-ekpe ikpe ahịa ahịa anyị otu ọnwa ma ọ bụ karịa, anyị gaara eche na ọ ga-abụ ọdịda kpamkpam.
Site na itinye nnukwu ụgbụ na ahịa ịntanetị, ị ga-enweta ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ. Ọtụtụ… ọbụlagodi… ndị ahụ na-eduga nwere ike inu. Ma ị ga-enwetakwa ụfọdụ whale ndị ị na-agaraghị enwe ohere iji dọta. The whales na-achọ oge iji mee ka ị wulite ikike na ntanetị, wulite ntụkwasị obi na itinye aka dị ukwuu, zụlite njikọ ndị ahụ ma mechie ahịa ndị ọzọ.
Mee elu mee ala, ego ị na-enweta kwa ndu ga-abawanye, ọnụahịa gị kwa ndu ga-ebelata, ị ga-ewepụta ezigbo ụzọ ntozu.
Ọ na-ewe oge. Zuo ike ka anyị nyere gị aka.
Tags: na-eduga m inungọpụ ahịaiguzogide ahia
5 Njem Azụmaahịa Njem Na-egosi ụdị Achọrọ Gị Ime